News | उत्तर कोरिया
News | Tag: उत्तर कोरिया
दक्षिण कोरियाली नागरिकको हत्या सम्बन्धमा संयुक्त छानविन टोली गठन गर्न ब्लू हाउसको आग्रह
के हुँदैछ उत्तर कोरियामा ?
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ अनले कोरोनाभाइरस र आँधी विरुद्ध लड्न तयारी अवस्थामा रहन सबैलाई आह्वान गरेका छन् ।
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका नेता किम जोङ उनले सत्तारुढ मजदुर पार्टीको दुर्लभ अधिवेशनको आह्वान गरेका छन् ।
उत्तर कोरियामा पहिलो कोरोना केश फेला परेको आशंका, किमले बोलाए आपत्तकालिन बैठक
एजेन्सी । उत्तर कोरियामा पहिलो कोरोना संक्रमण केश देखिएको आशंका गरिएको छ । उत्तर कोरिया सरकारले उक्त केशलाई मध्यनजर राख्दै कांइसंगको बोर्डर क्षेत्रलाई आधार बनाएर लकडाउन घोषणा जारी गरेको छ ।
'अमेरिकासँग वार्तामा बस्न उत्तर कोरियालाई कुनै आवश्यकता छैन'
चोए सोन हुई
एजेन्सी । उत्तर कोरियालाई वासिशङ्टनसँग पुनः वार्ता शुरू गर्नुपर्ने कुनै महशुस नभएको प्योङयाङका उच्च कूटनीतिज्ञले शनिबार बताएका छन् ।
किन बिग्रिदै छ दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको सम्बन्ध ?
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले सीमा क्षेत्रमा माइकिङ् गर्दै सन् २०१८ को शिखर सम्मेलनमार्फत् दक्षिण कोरियासँग सहमति गरिएका सहमतिलाई रद्द गरिएको जनाएको दक्षिण कोरियाली सैन्य अधिकारीले बताएका छन् ।
'उत्तर कोरियाको नेतृत्वको अपमान गरियो'
एजेन्सी । उत्तर कोरियाले मंगलबार मध्यान्हदेखि लागू हुने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्पूर्ण संचार सम्पर्क बिच्छेद गर्ने जनाएको छ ।
२० दिनपछि सार्वजनिक भएका किम जोंग उनको हातमा रहस्यमय निशान
एजेन्सी । उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उन २० दिनसम्म गुमनाम रहेका थिए । अन्तत उनी एक मे मा एक फ्याक्ट्री उद्घाटन गर्दै गरेको देखिए । उनी गुमनाम भएसँगै अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलै खैलाबैला मच्चिएको थियो ।
कति छ उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उनको सम्पत्ति ?
एजेन्सी । विश्व चर्चित नेता हुन् उत्तर कोरियाका शासक किम जोंग उन । पछिल्लो समय उनको मृत्युको खबर बाहिर आएको थियो । तर, उनी २० दिनपछि सार्वजनिक भएका छन् । विलासी जीवन बिताउन चाहने उनको लाइफस्टाइलबारे कमैलाई थाहा रहेको छ ।